Women Scheme Brief by RKCL
Women Scheme Application Form
Detailed Investment Guidelines Unde...
Updated women scheme order 2014
Teaching aids session-i
http://allburmamonksalliance.orgVolume 1, No 21 http://allburmamonksalliance.com Volume 1, No 21 7th December 2010
All Burma Monks Alliance (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖြွဲ့ ကီး) ဃမဟာနာယကအဖွ့၏ဲသက်တမ်းတလျှောက် မတရားသော လုပဆောင်မများကို ထန်းလက်ဖြင့်ှု ကာနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ သံဃ မဟာနာယက အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ် ခဲ့တဲ့ မတရားမှု အများအပြားဟာ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးမှာ ဖြစ်ခ့သည် ကိုတောဲ့ခံရဖူးသူများနှင့် ကြားဖူးသူတိုင်း သိရြှိ ကလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သံဃာများ အနေနဲ့ကလည်းကဲ့ရဲ့လိုသော စိတသက်သက်ဖြင့်သာ ဝေဘန်ထောက်ပ်ြနေကြခြင်းမျိုး မဟုတြ် ကပဲ အဖွဲ့အစည်းကြီးအနေဖြင့် သံဃာထုတရပ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို လူအများစုက ကိးကွယ် ယြုံ ကည်မှုလုး၏ ရှေ့မှ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမအတိုင်း မှန်ကန်စွာ ဆုးဖြတ် ရပ်တည်ပေးစေံရှိကြသည့်အလျှောက် အများယုံကြည် လေးစားကြသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ လြုိ ခင်း၊ အဂတိတရားကင်းရှင်းစွာဖြင့် ဘက်လိုက်မများ ကင်းစေလို ခြင်း၊ှုသံဃာတော်များ သည်လည်း ပြည်သူလူထု၏ အကြပ်အတည်းဘေး၊ အာဏာပိုငများ၏ စေခိုင်းတိုင်း မလုပ်ပဲ ဓမ္မဝနယနဲ့ အမှန်တကယ် ညီ်ိမတရားမှုဘေး၊ သဘာဝဘေး ဒုကများနှင့် ရင်ဆိုင် တွေ့ကြုံလာသမှ္ချ ညွတ်စေလိုခြင်း၊ သံဃာများနှင့် သာသနာရေးကိစ္စများ၌ သာသနာတိုငးမှာလည်း လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားပဲ လူထ၏ရှေ့ကနေပြီး မားမာ်းု ဘက်မှ အမှန်အတိုင်း ရပ်တည်ပြီး ဖြေရှင်းပေးစေလိုခြင်း၊ စတဲ့ မှန်မှန်မတ်မတ် ရပ်တည်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည်မှာ သမိုင်းတ ကန်ကန် လုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထောက်ပြနေကြခြင်းဖြစ်လျှောက်လုံးဖြစ်နေတာကို ပြည်သအားလုံး အသိပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ူသည်။ဖြစ်ခြဲ့ ပီးသမျှ အရေးကိစ္စများနှင့် နိုင်ငံတဝှမးမှာ မီးဘေး ရေဘေးစတဲ့်ဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်လာချိနများမှာ အထင်အရှား တွေ့မြင်ကြရ်ထိက့သို့သာဲု လုပဆောင်မည်ဆိုပါက်သံဃာထု တရပ်လုံးကမည်ဖြစ်ပေသည်။ အထူးသဖြင့် မန္တလေး ပုဏ္ဏားကုန်းရပ်ကွက် မီးလောင် အပြစ်မမြင်ပဲ ယြုံ ကည် စိတ်ချစွာ အားကိုးအားထား ပြုကြမည်မှာ မလွဲစဉ်ကဆိုလျှ င် အစ္စလာမ်လမျိုးများနှင့် ပစ္စည်းများကို စောင့်ရှောက်ထိမ်ူးဧကန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဖွ့အစည်းတခုမှာ ဦးစီးဦးဆောင်လုပြ် ကတဲ့ သဲူသိမ်း ကာကွယ် သိမးဆည်းပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့၏်များက ကိုယကျိုးမဖက်ပဲ အများအတွက်ကို မျှမျှတတ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့်ကောင်းချီးပေးသံကို အထူးခံစား ခဲ့ရဖူးလေသည်။ အခြားဒေသများ၌ လုပဆောင်ကြမည်ဆပါလျှင်ယနေ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ို ဒေါ်အောင်လည်း ထိုကသင့်သလို ကူညီမှုများရှိခသည်။့်ဲ ဆန်းစုကြည်ကဲ့သ…ဆန့်ကျင်ဘက်အာဏာရှငစစ်အုပ်စုကဘယ်လောက်ို့်ပင် အပုတချ ပြောဆို ရှုတ်ချနေပေမယ့် ခေါင်းဆောင်တယောက်၏်ထိက့သို့ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မည်သည့်အကျိုး တစုံတရာကို မျှဲု လုပရပ်က မျှတပြီး ဖြောင့်မတ် မှနကန်မှုရနေတဲ့အတွက် ပြည်သူတရပ်ှိမြော်မှန်းချက်ဖြင့် လုပဆောင်တာမျိုးမဟုတပဲ် မိမိတို့ရဲ့ တိုငးပြည်လုံး၏ ယြုံ ကည်ကးစားမှုနှင့်ို တကမ္ဘာလုံးကပါ လေးစား ထောက်ခံအတွင်းမှာ ရှိကြတဲ့ သတ္တဝါများ ပြည်သများ၏ အကျိုးကို မေတ္တာ ကရုအားပေးနေကြပြီး ဂုဏ်ပြုချီးမြောက်မှုများစွာကို ခံစားနေရသလို ကမ္ဘာ့ဏာများဖြင့် စွမ်းနိုငသည့်ဘက်မှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမည်ဆိုသည့်ထိပတန်းတွေးခေါ်ပညာရှင် စာရင်းဝင်လာခဲ့တဲ့ သူရဲ ကောင်းတယောက်ဉာတတ္ထစရိယ လောကတ္ထစရိယအကျင့်များကို မည်သူကမျှ မတိုက် ပင် ဖြစ်လာပါသည်။ ဒါဟာ မှန်ကန် မွန်မြတ်တဲ့ လုပဆောင်မှုနဲ့ စွန့်လွှတ်တွန်းရပဲ ကိုယ်ပိုငအသိများဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်ပေသည်။်အနစ်နာခံမှုဆတဲ့ လောကဓံ တရားများရဲ့ဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခြဲ့ ခင်း၏ို၎င်းကဲ့သို့ အများအကျိုးကို အမှန်တကယ်လိုလားစွာ ဆောင်ရွက်နေကြ အကျိုးဆက်ပင် ဖြစ်သည်။တဲ့ သံဃာတော်များက မိမိတို့ကို ဦးစီးဦးဆောင်လုပြ် ပီး အဖွဲ့အစည်းတရပ်အနေနဲ့ အုပ်ချုပ်နေပါတယ်ဆတဲ့ သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ အစည်ိးု ပညာရှိဆတာ စာပေကျမ်းဂန် ပညာတွေတတ်ထားရုံ ဘွ့တွေရရှိထာိးဲုအဆင့်ဆင့်မှာ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့လုပရပ်တွေ မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့ လုပ်ရုံနှင့် ပညာရှိလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ အမှားအမှန် တရားမျှတမှုရပ်တွေ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေ၊ လုပသင့် လုပ်ထိုကသည်များကို မ် ရှိမရှိ၊သဘာဝကျ မကျ၊ အကျိုး အကြောင်း၊ လုပသင့် မလုပ်သင့် စ်လုပဆောင်ပဲ အာဏာပိုငတွေ အကြိုက်လိုက်ကာ မှန်သည်မှားသည် တာတွေကို ခွဲခွဲခြားခြား သိမြင်ပြီး လမ်းမှန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဆောင်ချက်ရှိ်မှ သာသဘာဝကျသည် မကျသည်များကို စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု မရှိပဲ အဂတိ လောကီရေးရာအနေနဲ့ ပညာရှိလို့ ဆိုသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘွ့ထူး ရာထူဲးတရားများ လိုက်စားပြီး လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကို များစွာတွေ့မြင် လာ အာဏာ ဂုဏ်ရှိန်ဝါများကို မက်မောတွယ်တာမှု ကင်းစွာနဲ့ စွန့်လွှတ်နိုငရ်ဲကြရသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓကိုယတော်မြတ်က ဗြဟ္မဇာလသုတတော် သလို နာခံယူမှုလွယ်ကာ ဝေဘန်မများကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိ ရမည်ဖြစ်ှုမှာ “အဘူတံ အဘူတတော အတစ္ဆံ အတစ္ဆတော-စသည်ဖြင့်.. မဟုတ် သည်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ လက်ယာရံ လက်ရးတော်ဖြစ်တဲ့ ပညာ အထက်မြတ်ဆုံုးံတာ မမှန်တာ မတရားတာများကို တွေ့မြင်ရရင် မမှနတ့အတိုင်း မတရာ်းဲ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ကိုယတော်မြတ်ကြီးကို ကိုရင်ကလေး က လမ်းညွှန်ပြီ်းတဲ့အတိုင်း ပြောဆိုရမယ်၊ဖြေဖျောက်ရမယ်” လို့ မိန့်မှာခဲ့ တဲ့ သြဝါဒ ထောက်ပြတာကို စိတမဆိုးတဲ့အပြင်ပညာရှိကြီးက လက်အုပ်ချီပြီးအတိုင်း သံဃာများက လုပရပ်အမှားများကို မှန်မှန်ကန်ကန် ကိရင်လေးထောက်ပြတာကို ရိုရိုသေသေနဲ့ နာခံခ့ဖူးတာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဲုလုပဆောင်လာစေဖို့ရန် ဝေဘန် ထောက်ပြနေကြ ခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။်များအားလုံးပင် သိကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အသိဉာဏ်ပညာကြီးလာရင် သီးခံမှုလဲကြီး လာပါသည်။ တရား မမျှတတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးကိုလည်း ဒီလို ထောက်ပြ ပြောဆိုနေကြသော သံဃာများမှာလည်း စာ တတ် မည်သည့်အခါမှလည်း လုပဆောင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်ပေတတ် အသိဉာဏ် ပညာထက်မြတ်ကြတဲ့ သံဃာများ ဖြစ်ပြီး သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာ သမျှ သာသနာနဲ့သံဃနာယကအဖွ့အစည်း အဆင့်ဆင့်များကဲ့သို့ ဘွဲ့ထူး ရာထူး အာဏဲာဆက်စပ်သော အကြောင်းကိစ္စရပ်များတွင် သံဃာများ နှင့် သာသနာပါဝါ ဂုဏ် ပကာသနများကို အလေးထားကြသော သံဃာများ မဟုတြ် က ဘက်မှ မားမားမတ်မတ် မှန်မှန် ကန်ကန်သာ ရပ်တည်ဖြေရှင်းပဲ သာသနာကို အမှနတကယ် သန့်ရှင်းပြီး တိးတက်စေလိုတဲ့ ဆန္ဒများနှင့်ု လုပဆောင် သွားမည်ဆိုပါက သံဃာထုတရပ်လး၏်ုံ ယြုံ ကည် ကုးစာိးပရိယတ်ပဋိပတ်ကို ဆင့်ပွား ပေးနေသော သံဃာများပင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါ ထောက်ခအားပေးမှုကို ခံကြရလိမ့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း…။ံကိပင် သံဃမဟာနာယကဥက္ကဋ္ဌက အန္ဓဗာလဟု ပြောဆိုခြင်းသည် သုံ
Volume 1, No 21 Page3အခု ဒို့တိုင်းပြည်မှာ မသာလို ဘဝသေ မေး တပည့်တော်တို့နိုင်ငံ နေရာတကာမှာ နေတဲ့သူတွေများနေတာဟာ မသိတ့သူတွေ ဖြစ် အကြောက်တရား လွှမ်းမိုးနေပါသည်ဘုရား၊ ထိုဲနေကြလို့ပဲ။ အကြောက်တရားနှင့် ပါတ်သက်၍ တပည့်တော် တို့က ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓဓမ္မအမြင်အရ မသိရခြင်း အကြောင်းတွေကတော့ အကြောက်တရားဆိုတာ ဘာပါလဲဘုရား အများကြီးပေါ့၊ သိရမှန်းကို မသိတာရယ်၊ သိရမှန်း ရှင်းလင်းစွာ ဖြေကြားပေးပါဘုရား။ သိသော်လည်း သိအောင်ညွှန်ပြမယ့်သူမရှိတာ ရယ်၊ မသိအောင် ဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်ထားတာ မကြောက်ချင်သူ။ ရယ် စတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပေါ့။ အဒီထဲကမှ ဖြေ ဗုဒ္ဓဓမ္မအရ အကြောက်တရားဆိုတာ ကဲ ဒီကနေ့ အမျိုးသားအေင်ပွဲနေ့ကို သိတဲ့သူတွေက ဒီလိုမြင်တာပေါ့... သြော်... ဒေါသဖြစ်ပါတယ်၊ ထက်သန်သောဒေါသဖြစ်ရင်အကြောင်းပြုပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ငါတို့ဗမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ သတ်မယ်၊ဖြတ်မယ်၊တိုက်မယ်၊ခိုက်မယ်စတာတွေတာနော်။ ပညာရည်တိုး တက်မြင့်မားလာပါရင်၊ အသိပညာ လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပြီး၊ ဆုတ်နစ်တဲ့ ဒေါသဖြစ်ရင် စိုး အဲဒီတော့ ဒီကနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ် ဗဟုသုတများကြွယ်ဝလာရင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ သူတို့ ရိမ်မယ်၊ပူဆွေးမယ်၊ကြောက်မယ် စတာတွေလုပ်ကို ဘာကုသိုလ်လို့ ခေါ်ကြမလဲ?........ ကိုလိုနီအစိုးရရဲ့ အာဏာကိုထိပါးလာမယ့် အရေး ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဒေါသပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ ကုသိုလ်မြတ်လို့ ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ထားတဲ့ မတရားဥပဒေတွေ ဒေါသော အတ္ထံ နဇာနာတိ= ဒေါသသည်ခေါ်ကြ ရအောင်နော်…. ကို သပိတ်မှောက်တော်လှန်ခြဲ့ ကလို့ အမျိုးသား အကျိုးရှိခြင်း/မဲ့ခြင်း အကြောင်းကို မသိပါဘူး ဒီ ဒေါသအကြောက်တရားနှင့်အတူ သူတပါးစည်း ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့ ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ ကုသိုလ် ပညာရေး အသိတရားတွေတိုးပွားလာပြီး တော် စိမ်ဥစ္စာ ဂုဏ်ပကာသနတွေကို ငြူစူစောင်းမြောင်းမြတ်လို့ ဆိုရတာလဲဆိုတော့… ဒီအမျိုးသားနေ့ လှန်ကြတော့ ငါတို့ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ ခြင်း၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ဂုဏ်ပကာသနစတင်ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဦးဆောင်ခြဲ့ ကတဲ့ တာပါလား...လို့မြင်ပြီး အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ကျောင်းသားကြီးတွေကို ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လိုသူတွေက သူတို့ရဲ့ ပညာရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ စည်း တွေ သူတပါးမှာ မရှိစေလို(မနာလို)ခြင်း၊ လုပ်သင့် တာ မလုပ်ပဲ မလုပ်သင့်တာတွေ လုပ်ခဲ့လို့ နောင်ပြုပြီး အမျှအတန်းပေးဝေပြီး ကျေးဇူးဆပ်ကြတာမို့ ကမ်းတွေကို ဒီလို တော်လှန်ကြမှာစိုးပြီး ဒီလို တ တဖန်ပူပန်ခြင်းတွေလည်း တွဲလျက်ဖြစ်ပေါ်ဒီကနေ့ ကုသိုလ်ပွဲကို ကျေးဇူးဆပ်တ့ကုသိုလ်ပွဲလို့ သမိုင်းတွေကို ဖျောက်ဖျက်ကြရင်း ကျေးဇူးကန်ဲးပြောရတာဖြစ်တယ်။ သူတွေအဖြစ်ရောက်ကာ သံသရာအရေးမတွေးဝံ့ လေ့ရှိပါတယ်။ စရာဖြစ်ကြရပြီး ကျေးဇူးသိတတ်လို့ ကျေးဇူးဆပ် အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်မှာ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ဆိုတာကလည်း ကျေးဇူး တဲ့သူတွေကိုလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ အပါယ်ငရဲအထိ အကြောက်တရားဆိုတာ ငါ၊ ငါ့ အသက် ငါ့စည်းသိတတ်ဖို့လိုတယ်၊ ကျေးဇူးသိတတ်မှ ကျေးဇူး တွန်းပို့နေကြတဲ့ အခုလိုခေတ်ကြီးမှာ ဒီကနေ့ စိမ် ဥစ္စာ အာဏာ ပါဝါတွေ ဆုံးရှုံးမှာ ကြောက်တဲ့ဆပ်နိုင်မာဖြစ်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ှကျေးဇူးဆပ်ကြတဲ့ ကုသိုလ်မြတ်ကိုပြုလုပ်နိုင်ကြ ဒေါသမူ စိတ်နှင့် ဒေါသ၊ဣဿာ၊မစ္ဆရိယ၊ ကုက္ကုစ္စ အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် ဒုကနိပါတ်တော် သူတွေဟာ တကယ့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေ- စေတသိက်အကုသိုလ်တရားများသာဖြစ်တယ်လို့တနေရာမှာ ဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ...ယော ဝေ ကတညူ၊ကတ ဖြေလိုက်ရပါသည်။(နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ထိုအကြောက် ဒီလောကကြီးထဲမှာ ရနိုင်ခဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဝေဒီ ဓီရော= သူတပါးပြုအပ်ဖူးသော ကျေးဇူးကို တရားနှင့် နေနေရပါက နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အကုသိုလ်နှစယောက်ရှိတယ်တဲ့...တယောက်က ကတညူ= သိတတ်သောသူ၊သိတတ်ပြီး ကျေးဇူးဆပ်သောသူ ဖြစ်နေရသည်ကိုသိကာအကြောက်တရားဖယ်ရှာ်းပြုအပ်ဖူးသော ကျေးဇူးကို သိတတ်တ့သူတ့... တို့သည် ပညာရှိသူတော်ကောင်းအစစ် ဧကန်ဖြစ် မကြောက်တရားပွားတိုးပွားနိုင်ကြပါစေ)ဲနောက်တယောက်က ကတဝေဒီ=ပြုအပ်ဖူးသော ၏ ဆိုတဲ့ တရားတော်အရ သိနိုင်ကြတာမို့....ကျေးဇူးကို (ကျေးဇူးရှိကြောင်း) ထုတ်ဖော်ပြောဆို ဒီကနေ့ အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့မှာ ကုတတ်တ့သူဆိုပြီး နှစ်ယောက်တဲ့။ဲသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီး ကျေးဇူးရှင်တွေကို ကျေး အကြံပေး အဖွဲ့ ဇူးဆပ်တ့အနေနဲ့ အမျှအတန်းဝေကြပြီးသကာလဲဦးပညာဇောတ၊ဦးရာဇိန္ဒ ၊ ဦးဥတ္တ မ သိ ရီအဲဒီတော့ ဒီကနေ့ အမျိုးသားအောင်ပွဲ ပစ္ဆိမာ ဇနတာ=နောင်လာနောင်သားလူအများတို့နေ့ရယ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် စတင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ တာဝန် ခံအ ယ် ဒီတာသည်၊ဒိဋ္ဌာနုဂတိံ= မိမိတို့လပ်ခဲ့သည်ကိုသိပြီးလူမျိုးတိုင်း တက္ကသိုလ်ပညာကိုသင်ကြားခွင့် မရ ဦးနန္ဒ မာလာ အတုလိုက်ကာ ပြုလုပ်ခြင်းသို့၊ ဂစ္ဆန္တု=ရောက်နိုင်ရှိနိုငစေရန်အဖက်ဖက်မှ ကန့်သတ်ဖိနှိပ်ထား အု ပ်ချုပ်ရေးမှူး ကြပါစေ ဆိုတဲ့ ရှေးသူတော်ကောင်းများ ရှေ့သည့် တက္ကသိုလ်ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်သပိတ် ဦးဇနက ဆောင် လမ်းပြသွားခဲ့သည့် စံနမူနာကောင်းတွေမှောက်ခ့သည့် ကျောင်းသားကြီးတွေဟာ ဒို့အပေါ်ဲထု တ်ေ ဝသူ ကို နည်းလမ်းတကျ ဖော်ဆောင်နိုင်ကာ လက်ငင်းကျေးဇူးမရှိကြဘူးလား?... မြန် မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာသံ ဃာ့ တ ပ်ပေါင်းစု ခဏ တွေ့ကြုံနေရသော နေ့စဉ်ဘဝ ပညာရေး၊ ဒီလိုကျေးဇူးရှိတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ကျေး ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေး ဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုး အဖွဲ့ ကြီးဇူးကိုသိရမယ်၊မသိရင်လည်း သိအောင်ကြိုးစား မှကင်းလွတ်ကြပြီးသကာလ ငြိမ်းအေးရာမှန် မြတ် အယ် ဒီတာအဖွဲ့ရမယ်၊ ဒို့ဗမာစကားတခုရှိတယ် မဟုတ်လား…. နိဗ္ဗာန်ကို ကိုယ်စီကိုယ်ငှ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါ ဓမ္မဃောသက၊ မင်းသားကြီး(၈၈)၊ D-Wave မင်းသစ်“မသိ မသာ”တဲ့ ….မသိတ့သူဟာ မသာ=သေတဲ့ စေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရဲပါလေတော့သတည်း။ ကွ န်ြ ပူတာ စာစီ ၊ စာရိုက်လူနအတူတူပဲတဲ့။့ဲ ABMA
Page4All Burma Monks Alliance (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖြွဲ့ ကီး) အလှမ်းကွာဝေးမြဲ ချေမှုန်း ဖယ်ရှင်း ပစ်တော့မယ် … ။ ပုံစံခွက် ထဲ မွန်းကြပ်ခဲ့ သေနတ် နဲ့ စစ်အာဏာကို ကျားကန် ထားတဲ့ အိမ်အိုကြီး မေးခွန်း ထုတသူတွေက်ငလျင် ဗဟိုချက်မှာ စိန်ခေါ်သူတွေက ယိမ်းခါ တုန်ဟည်းနေ ခြေဖဝါး မှ ငယ်ထိပ် အထိတည်ငြိမ်ရေး နဲ့ လုံခြုံရေး သမိုင်းဘီးများက လက်နက်အပြည် နဲ့ မလုံ မခြုံ ဖြစ်နေကျ မကောင်းဆိုးဝါး အုပ်စုကို ဖိနှိပ် သူကို အံတုတဲ့ ကသောင်းကနင်း နိုင်ငံမှာ တိုက်ထုတ် နင်းချေ လူထုတိုက်ပွဲများစွာ ပစ်တော့မယ် … ။ အနာဂတ် ကိုယ်စားပြု သူတွေ နဲ့ မကြာခင် အတိတ် ကိုယ်စားပြု သူတွေ ရင်ဆိုင် ဆင်နွှဲ ကြတော့မယ် ငြိမ်းသေနေတဲ့ မီးတောင်တွေ နေရောင်ခြည် ကျရောက်ရာ ငါတို့ အသေအချာ သိတယ် မရေ တွက်နိုင် အောင်ပဲ နေရာအနှံ့ ကျေးလက် မြို့ပြ နိုင်ငံရေးမှာ နိုးထ ပေါက်ကွဲကြ အုံကြွ ပေါက်ကွဲ လာကြပြီ … ။ “… အကယ်၍ သာမရှိဘူး … ” ။ ။ ဒေါသမာန် နဲ့ မုန်တိုင်းတွေ ဆူနာမီ လှိုင်းများစွာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဇေဋ္ဌ ရာဇပလ္လင် အားလုံးကို ဆန္ဒ နဲ့ ဘဝဟာ umwGef; atmfyDus,f facebook မှ
Volume 1, No 21 Page5မယ်´´ တဲ့။ ဒီဘုရင်ကတော့ မိုက်ကို မိုက်ပါတယ်။ နားမ ၀င်ဘူး။ ကပိလက သားငယ် ကောဓကမှ သား ကြီး လို့ ဗြောင်လိမ်တော့တာကိုး။ ကောဓကကိုဘဲ နိုင်စေချင်တယ်လေ။ နေရာပေးချင်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်တုံး……..။ ပထမတစ်ခွန်း လိမတာနဲ့ - သူ့ကိုစောင့်တဲ့်နတ် (၄) ပါးလဲ သံလျက်တွေကို ပစ်ချပြီး ပျောက် ကွယ်။ ကိုယ်နံ့ကလဲ မစင်တွင်းနံ့ထွက်။ ခံတွင်းက လည်း ကြက်ဥပုပ်စော်နံ။ လူကိုယ်တိုင်လဲ မြေပြင်လူမိုက်များဟာတယ်ပြီးကြောက်စရာကောင်း ပေါ် ရောက်သွားရတာပေါ့။တယ်။ ကပိလ ရှင်ရသေ့က - ``မြတ်သောမင်းကြီး -သူတပါးကို ထိပါးရန်လိုသလောက် ကိုယ့်အတွက် အမှန်ကို ပြန်ပြောရင် နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ပါဦးလည်း အကျိုးမဲ့ကိုသာ ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ မသိ မယ်´´ ဆိုပြီး တရားပြ နားချရှာပါတယ်။နိုင်ရှာဘူး။ လက်မခံဘူး။ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်လိမ်ပြန် ဒါကြောင့်လည်း ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ဒီလောက်ဘုန်းကံကြီးမားပေမဲ့ မိုက်ဇာတ်ကပါလောင်းလျာ အကိတ္တိရသေ့သူတော်စင်က - လေတော့ အစဉ်အလာအတိုင်း ပုရောဟိတ်ရာထူး တယ် ။ သိတယ်မဟုတ်လး။ ဘုရင်က ခေါင်းမာ ကို အရင်ပုရောဟိတ်ရဲ့ သားအကြီးကို ပေးရမဲ့ တယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ ဘုရင်လဲ ဒူးခေါင်းအထိ မြေထဲ``လူမိုက်ကို မတွေ့ရ ၊ မမြင်ရ၊ လူမိုက်ရှိတယ် အစား၊ သူနဲ့ အလိုက်သင့်လိုလားတဲ့ သားငယ်ကို ရောက်သွားတယ်။လို့တောင် မကြားရပါလို၏။ လူမိုက်နဲ့ မပေါင်းမိရ ရာထူးပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒာဂတိလိုက်ပြီး ဘုရင့်မာန်နဲ့ တတိယအကြိ်မ်လိမ်ပြန်တော့ - ပေါင်ရင်းအထိပါလို၏။ စကားလက်ဆုံတောင် မပြောရပါလို၏´´ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်။ သားငယ်ဖြစ်တဲ့ သူငယ် မြေမြိုပြီ။စသဖြင့် သိကြားမင်းကို သူလိုချင်တဲ့ ဆုအဖြစ် ချင်းကောဓကမ္ဗလကို သားအကြီးဖြစ်တယ်။ သားထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကို သိကြား စတုတ္ထမြောက်လိမ်တော့ - ခါးအထိရောက်။ ကြီး ကပိလရသေ့ကို အငယ်ဖြစ်တယ်လို့ အများမင်းက မေးတဲ့အခါမတော့ - ပဉ္စမမှာ - ချက်တိုင်။ ရှေ့မှာ မုသားဆိုပြီး ဖြစ်စေမယ်လို့ ကတိပေး``လူမိုက်နဲ့ ထိစပ်ဆက်သွယမိတာနဲ့ မကောင်းသတဲ့။ ခေတ်စကားအရတော့ မနိုင်နိုငအောင်ဆဋ္ဌမတော့ - ရင်ဘတ်။ကျိုးဟာ မလွဲမသွေ ကူးစက်တတ်တယ်။ (ပါပံ လိမ်ပေးမယ်။ အများရှေ့မှာ လိမ်ပေးမယ်ပေါ့။ ဒီအချိန်ထိလဲ အမှန်ကိုပြောရင် နဂိုအတိုင်းသင်္ကမတေ၊ ဓုဝံ)´´ လို့ပြန်ပြောပြပါတယ်။ ရက်သတ်မှတ်တဲ့အခါ အဲဒီနေ့ကစပြီး (၇) ရက် ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဓမ္မကို စောင့်ရှောက်ပါ။ သစ္စာဘုရားဟော ဇာတ်တော်လာ အဆုံးအမတစ်ခုပါ။ မြောက်နေ့လို့ ချိန်းသတဲ့။ စကားကို ဆိုပါလို့ ရှင်ရသေ့က တရားပြ နားချပြန်ဒီလိုဘဲ - သံဝေဂယူစရာ လူမိုက်တစ်ယောက် အ အလွန်သန့်စင်တဲ့ အဲဒီခေတ်မှာ လိမ်ညာခြင်း ပါသေးတယ်။ကြောင်းလဲ ဘုရားဟော ဇာတ်တော်တစ်ခု မုသားစကားကို ဘယ်သူမှ ပြောလေ့မရှိတော့ ဒါပေမဲ့ မရပါဘူး။ရှိပါသေးတယ်။ စေတိယ ဇာတ်ပါ။ ဘုရင်ကိုယ်တိုင်မုသားပြောမတဲ့။ လိမညာမတဲ့ ဆိုသတ္တမအကြိမ်ထိ လိမ်ပြီး မြေလျှိုးတော်မူသွား တော့ ဒါဟာ သတင်းထူး၊ သတင်းဦးကြီးပေါ့။စေတိယတိုင်း၊ သောတ္ထိယမြို့က ဥပ၀ရမင်း အ တယ်။ အ၀ီစိအထိ ဒါရိုက်ဟစ်ပေါ့။ တပြည်လုံးက လူတွေက အဲဒီ (၇)ရက်မြောက်နေ့ကြောင်းပါ။ စေတိယတိုင်းကို အစိုးရလို့ စေတိယ မှာ မင်းရင်ပြင်ကို လာစုပြီး ``လိမ်ညာပွဲကြီး´´ ကို သြချရလောက်အောင် ခေါင်းမာပါရဲ့။မင်းလို့ဘဲ ခေါ်ပါတယ်။ သာမာန်လူမိုက်တော့ မ လာကြည့်ဘို့ စုဝေးရောက်လာကြတယ်။ဟုတ်ဘူး။ ``ဘုရင်မိုက်´´ လို့ပြောရမှာပေါ့။ နှယ် မိုက်တွင်းနက်ပါရဲ့။နှယ်ရရတောင် မဟုတ်ဘူး။ ရှေးကုသိုလ် အကျိုး ပုရောဟိတ်ကြီးရဲ့ သားကြီးဖြစ်တဲ့ ကပိလ သူအနိုင်ပေးချင်တဲ့လူအတွက် အဂတိ (၄) ပါးဆက်ကောင်းကြောင့် - ရသေ့လဲ ဘုရင်ကို တရားပြတားမြစ်ဘို့ ကောင်း မပယ်ရှားနိုင်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တူးဖြိုပြီး နစ်မွန်းခံ ကင်ခရီးနဲ့ ရောက်လာတယ်။ ဘုရင်ကလဲ ပရိ ၁။ ကောင်းကင်မှာ ရပ်မှီတည်နိုင်တယ်။ သွားရရှာပါတယ်။ လိမ်ပေးပြီး နိုင်စေချင်တဲ့ သူ့လူ သတ်အလယ် ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ရပ်တည်လို့ လဲ ဇာတ်သိမ်းတော့ အချည်းနှီးပါဘဲ။ ၂။ နတ် ၄-ပါးက သံလျက်ကိုင်ပြီး စောင့် ပေါ့။ရှောက်တယ်။ သတိပြုစရာ၊ သံဝေဂယူစရာ ကောင်းလှပါ ရှင်ရသေ့က ဘုရင်ကို လိမ်ညာခြင်း၊ မုသားဆို တယ်။ ၃။ ကိုယ်က စန္ဒကူးနံ့သင်းတယ်။ ခြင်း ရဲ့ အပြစ်တွေကို ရှင်းပြပြီး တားမြစ်ပါတယ်။ ကိုင်း - ကြည့် ။ ၄။ ခံတွင်းက ကြာညိုနံ့သင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဣဒ္ဓိ မှတ်သားစရာတစ်ခုကတော့ -``ပြည့်ရှင်မင်း လူမိုက်များဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်း(၄) ပါးပြည့်စုံသူပါ။ ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့ ဘုရင်ပေါ့။ တို့မည်သည် မုသားမဆိုအပ် ဘူး။´´ သလဲ။ ဘုရားအလောင်း ဆရာရသေ့ အတန်တန်သူ့ခေတ်ကာလကလဲ ဘဒ္ဒကမ္ဘာဦး အသင်္ချေယျ ``မုသားဆိုခြင်းဟာ ဓမ္မကို သတ်သည်မည် တားပြီး တရားပြတာတောင် - မိုက်တွင်းက နက်တမ်း။ လိမ်တယ်၊ ညာတယ်ဆိုတဲ့ မုသားစကား တယ်။´´ လိုက်ပါပေ့ဗျာ - ။ဆိုတာ ကြားတောင်မကြားဘူးတဲ့ခေတ်။ ``ကိုယ်တိုင်လဲ ဓမ္မရဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံရ စေတိယမင်းကတော့ ထားလိုက်ပါတော့။ ဒေ၀
Page6All Burma Monks Alliance (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖြွဲ့ ကီး) ၁-၁-၁၁။ (၁ - လေးလုံး) နေ့မှစပြီး အမှနတရား ကို ဦးတည် နိုင်ငံတော် အကျိုးကို ရှေ့ရှု လို့။်၁၁-၁-၁၁။ဆိုတဲ့ (၁ - ငါးလုံး) နေ့မှာ စိတ် သစ်၊ လူသစ် အင်အား သစ်တွေ ပြုစုပျိုး ထောင်ပြီး။ BurmaStrangeNews ၁၁-၁၁-၁၁။ ဆိုတဲ့ (၁ - ခြောက်လုံး) နေ့မှာ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် အဖွဲ့ အစည်းစုံ ဘလော့ရဲ့တင်ဆက်မှုမှာပြုံးစရာလေးတွေ အပြင် ရင်ကြားစေ့ချစ်ကြည်စာနဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်.....ွတွေးစရာလေးတွေပါနေတာလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒတ်လောင်း ဟာကိုး……။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်၊ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မစ္စတာ နံပြား နှင့် BS News အင်တာဗျူး ဒေ၀ဒတ်နဲ့ ပြိုင်ပြီး မိုက်မ့လူမျိုးတော့ ဒီကနေဲ့ကြွေးကြော်သံကလဲ ``အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ မြန်မာပြည်ကို အလည်လာသွားတဲ့ ကုလ အထူးခေတ် မရှိလောက်ဘူး ထင်ပါ့ဗျာ။ ရေး´´ တဲ့။ နားဝင်ချိုလိုက်တာ။ ပီတိဖြစ် ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ နံပြား ရန်ကုန် လေဆိပ် အတွေးအခေါ် ဘေးချော်လို့ မိုက်မှားမိတာမျိုး လိုက်တာ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ က မထွက်ခွာမီ သတင်းစာ ရှင်းလင်း ရာမှာ BSရှိခ့ရင်တောင် အချိန်မီ အခါကောင်းမှာ အမြင်ဲ``အမေ´´ News သတင်းထောက် ဇီးကွက် မျက်ပြူးကပြောင်းပြီး ကောင်းတာလုပ်နိုင်ရင် မိမိ သူတပါး ယုံကြည်အလေးအနက်ပြုတာကလဲ ``၂၁ - ရာစု အခုလို အင်တာဗျူးပြီးတော့ သတင်း ရယူ ထားအကျိုးများဘို့ ရှိပါတယ်။ ပင်လုံစိတ်ဓါတ်´´ တဲ့။ ညီညွတ်ရေးတေးသံ။ ပါတယ်။ ၂၀၁၀ - က ကုနတော့မယ်နော်။်BS News ။ ။ ဦးနံပြားခင်ဗျား၊ မြန်မာပြည် ကို တိုင်းပြည်ရဲ့ စည်းလုံးရေးအားမာန်မို့ ကြက်သီး နှစ်သစ်က ၂၀၁၁ ပေါ့။ (၁-၁-၁၁) ဆိုတော့ ဖြန်းဖြန်းထ, မိပါရဲ့။ လာရောက်ခ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံလေး သိပါရစေ။ဲ(၁) လေးလုံးနေ့ ပေါ့။ မစ္စတာ နံပြား။ ။ မြန်မာပြည်ကို ရောက် ဖူးချင် ဒါ့အပြင် - ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက်တော့ - (၈) လေး လွန်းလို့ ခရီးစဉ် တလျှောက်လုံး အရမ်း ရွစိ ``ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးနဲ့ အဖွဲ့အစည်းအား လုံးလုံးမှာတုန်းက တစ်ပါတီစနစ်ကို ပြည်သူ့အားနဲ့ လိုက်ခ့ပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ကတည်းကဲက ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဘို့ လိုပါတယ်´´ရပ်ဆိုင်းနိုင်ခဲ့ဘူးတယ်လေ။ မြန်မာပြည် "ရောက်ပြီလား" "ရောက်ပြီလား" ဆို ဆိုတဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကလည်း တန်ဘိုးရှိလိုက်လေ ပြီး၊ ဖင်တကြွကြွ ဖြစ်နေလို့ လေယာဉ်မယ် တွေ လာမဲ့နှစ်မှာတော့ တစ်မျိုးတည်းသော (၁) ရဲ့ ဗျာ။ က ခဏခဏ လာပြောရတယ်။ နောက်တော့ဂဏန်းလေးတွေ စုဝေးညီညွတ်မှုရတဲ့ ရှားပါး ``ကျွန်တော်တို့လဲ ပါဝင်ပါမယ်ဗျာ´´ လို့ ကိုယ့်စိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့လို့ လေယာဉ် ပြူရက်ထူးရက်မြတ်တွေ ကို သတိပြုမိပါရဲ့ဗျား။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး ၀န်ခံချက် ပြုပါတယ်။ တစ် တင်းပေါက်ကိုဖွင့်၊ လေယာဉ်မယ်တွေ မသိ ဖြစ်သင့်ပြီး၊ ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေ ပြောရရင် ဒေါင့် တစ်နေရာ ကျရာကဏ္ဍကပေါ့။ အောင် ကျွန်တော့်လက်ကို အပြင် ထုတ်ကြည့်တော့ - ဒါနဲ့ -ဆက်စပ်ဖြစ်စဉ်တချို့ ခေါင်းထဲပေါ်လာ ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ လက်ကို အထဲပြန်သွင်းပြီး၁-၁-၁၁။ (၁ - လေးလုံး) နေ့မှစပြီး အမှန်တရား မိ တယ်ဗျာ - ။ အဲဒါကတော့ လူထုအများ တော့ ကျွန်တော့်လက်ကို ကျွန်တော် ပြန်နမ်းကို ဦးတည် နိုင်ငံတော် အကျိုးကို ရှေ့ရှုလို့။ ပါဝင် ပတ်သက်တဲ့ အခင်းအကျင်းကြီး (၂) ခု ကြည့်ပါတယ်။ ဆိုပါတော့ - ။ ပထမ တစ်ခေါက်တုန်းက ၀က်သားနံ့ရတယ်ဗျ။၁၁-၁-၁၁။ ဆိုတဲ့ (၁ - ငါးလုံး) နေ့မှာ စိတ်သစ်၊ လူသစ် အင်အားသစ်တွေ ပြုစုပျိုး တစ်ခုက - နာဂစ်အလွန် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျွနတော်လဲ ... ဟ၊ ဒါ တရုတ်ပြည် ရောက်ထောင်ပြီး။ ဆိုတာ သန့်ရှင်းပါရဲ့လို့ လိပ်ပြာသန့်သန့် ပြော ပြီ..လို့ သိလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ခေါက် လက် နိုင်လောက်သလား။ ထုတ်ကြည့်ပြီး အနံ့ခံကြည့်တော့.. မဆလာနံ့၁၁-၁၁-၁၁။ ဆိုတဲ့ (၁ - ခြောက်လုံး) နေ့မှာ သင်းနေတာပဲ ဗျို့၊ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် အဖွဲ့အစည်းစုံ ရင် နောက်တစ်ခုက - ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြားစေ့ ချစ်ကြည်စွာနဲ့ တိုငးပြည်အကျိုးကို အဖြေဆိုတာကော လိပ်ပြာသန့်စရာရှိသလား။်ဟဲဟ.. ဒါ အိန္ဒိယပြည်ပဲပေါ့....ဟေးဟေးဟေဲးဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင် ဘယ့်ကလောက် မြန်မာပြည် ရောက်ခါနီးနေပြီပေါ့။ အမှန်ဘဲလိပ်ပြာသန့်စရာဆိုရင်တော့ ဘာပြောကောင်းလိုက်လေမလဲဗျာ - ။ စရာရှိ သလဲဗျာ - ။ ဘဲရီးဂွတ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ မြန်မာပြည် လေပိုင်နက်ထဲ ရောက်ပြီလို့ ကျွန်တော်ကတော့ စုစည်းမှု၊ ညီညွတ်မှု ထင်လိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်လက်ကို အပြင် ပြည်သူအများစုရဲ့ လက်တွေ့အမြင်၊ အကြား၊ရစေမဲ့နှစ်ရယ်လို့ အားသစ်ချင်ပါရဲ့ဗျာ။ အားလုံး ထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ မုန့်ဟင်းခါး နံ့လေးများ အသိတွေအရ ဆန့်ကျင်တဲ့ အဖြေမျိုးဖြစ်နေအကျိုးအတွက် စုစည်းညီညွတ်နိုင်ကြပါစေလို့လဲ ရမလား ပေါ့ဗျာ... ပါရက်နဲ့ -ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်... လေယာဉ် ပြူတင်းပေါက် ``အမှန်သစ္စာပါ´´ ရယ်လို့ လှည့်ဖျားစကား ဆို ရှေ့ပြေးနမိတ်လဲ ကောင်းပါပေရဲ့လို့ ဆိုချင် ကနေ အထဲကို ပြန်သွင်းပြီး နမ်းကြည့်မယ် လုပ် မယ်ဆိုရင် -တယ်ဗျာ။ အတိတ်၊ နမိတ်၊ ဗေဒင်ပညာတွေတော့ တော့... စေတိယမင်းကို ပြေးမြင်မိတယ်ဗျာ - ။သိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ အား... နားနားနား......ဟာရေး...... အားလား သူကတော့ ထားလိုက်ပါတော့ ဒေ၀ဒတ်လောင်း မြန်မာရော ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာပါ - လား.... ကျွန်တော့် နာရီ အဖြုတ်ခံသွားတယ်ဗျ။ ဟာကိုး - ။ ။ ``ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပြီ´´ ဆိုတဲ့ မစ္စတာ နံပြားက ကုလသမဂ္ဂကို ပြန်ရောက်ရင်ဝမ်းမြောက်အားတက်သံတွေလဲ ညံညံစီလို့။ ဒီအဖြစ်အပျက်အကြောင်း အသေးစိတ်ကို ကြေ ညာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ဖုိ့စီစဉ်ထား ရင်ထဲကလာတဲလှိုင်းခတ်သံစဉ်တွေနဲ့(အောင်သန်းကျော်) တယ်လို့ ဆက်လက် ပြောကြားသွားပါတယ်``အမေ ….´´ ရယ်လို့ ကင်ပွန်းတပ်လိုက်ကြပြီ။ ခင်ဗျား။
Volume 1, No 21 Page7၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲက ဒီမိုကရေ ကြီးနိုဝင်ဘာ(၇)ရက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခြဲ့ ကပါတယ်။ တဲ့အာဏာကိုတွေ့နေရပါတယ်။စီ စံနုန်းနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ အကြောင်းတွေရေးနေ ညီလာခံ အစမှာ လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ဒါတင်မက နိုင်ငံတော်မှာ အရေးပါတဲ့ အမျိုးပြောနေတော့၊ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ကို ဘယ် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေရ့တင်ပြချက်တွေ သားကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီကို(၁၁)ဦဲးသူတွေကရေးဆွဲခ့တာလဲ၊ ဘယ်လိုထောက်ခံ အဲကို ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။တပြိုင်ထဲမှာဘဲ နဲ့ဖ့စည်းရာမွှာဲ ၊ဒုတိယသမတ၊ တပ်မတော်ကာတည် ပြုချက်ရယူခဲ့တာလဲ ဆိုတာ သာမန်ပြည်သူ အတိုက်အခံတွေဘက်က ၈၈ တုန်းက စစ်တပ် ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်တွေနဲ့ အတူ အောက်ခြေက စစ်သည်တွေ အမှတ် ရဲ့မတ ရားမူရက်စက်မူတွေ၊ နဝတ၊ နအဖ ခေတ် ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးရအောင် နဲနဲ ပြန်ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမူတွေ၊ စီးပွာရေး ဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး စုစုပေါင်း(၆)ဦးနဲ့ ၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာမှာ စစ်တပ်က အာ သောင်းကျန်းတာတွေ၊ လာဘ်စားချစားမူတွေကို စစ်တပ်ကအများစုမဲကိုယူထားပါတယ်။ဏာ သိမ်းလိုက်ပါတယ်၊အဲဒီတုန်းက အာဏာ ဖော်ထတ်အရေးယူဖို့ လေသံတွေထွက်လာတော့၊ နိုင်ငံတော်ရ့အမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဲုသိမ်း ခေါင်းဆောင်လဲဖြစ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲစစ်အာဏာသက်ဆိုးရှည် တဲ့ လွတ်တော်ရြဲ့ ကီးကြပ်မှု အောက်က ကင်းလဲဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မူုးကြီးစောမောင်က ၊ ပါတီစုံ မဲအစီအမံတွေကိုဒီမိုကရေစီစံနုန်းနဲ့ညီညီမညီညီ့  လွတ်ပြီး သီးခြားရပ်တည်သော အခြားနိုင်ငံတော်ဒီမုကရေစီိရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်ပပေးမယ် ထဲသွင်းရေးဆွဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။့  အဖွဲ့အစည်းများ ယန္တရားများမရှိစေရဆိုတဒီမိုက့ဲပြီးရင်စစ်တပ်ကစစ်တန်းလျှားပြန်မယ်လို့ကတိပေး သေခြာတာကတော့ စစ်တပ်နဲ့အတိုက်အခံတွေအ ရေစီ စံနှုန်းနဲ့လဲ မကိုက်ညီတာတွေ့ရပါတယ်။ပြောဆိုခ့ပါတယ်။ ၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြားက တင်းမာမူတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတချိုဲ့ပြည်တွင်ရေး ပြည်ပရေးတွေကိုအဲဒီ အမျိုးမဆလ ရဲ့ တစည ပါတီအနိုင်မရဘဲ၊ ရဟန်းရှင် လူ အချက်တွေထဲ့သွင်းပြဌာန်းခဲ့တာပါ။ ဥပမာ ယင်း သား ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီက ပြည်သူ့ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ အဖွဲ့ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ ဝင်တဦးဦး သို့မဟုတ် အစိုး လွတ်တော်တို့ အမျိုးသားလွတ်တော်တို့ထက်ထောက်ခံမှုပါရသွားတဲ့ အင်အယ်ဒီ ပါတီက အ ရအဖွဲ့ဝင်တဦးဦး၏ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက် ကျော်ပြီးလုပ်လာမဲ့ အနေအထားမျိုးမို့ လုံးဝ မဖြစ်ပြတ်အသတ် အနိုင်ရသွားပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်တွေ များ အပေါ်အကြောင်းပြု လျက် ယင်းတို့အား သင့် တဲ့ကိစ္စပါ။ အရေးအရာကိစ္စမှန်သမျှ အများဘာလုပ်ရမှနးမသိဖြစ်သွားပြီး အဲဒီတုန်းက ရှိနေ တရားစွဲဆိုခြင်း၊အရေးယူခြင်းမရှိစေရလို့်ပြဌာန်း သဘောဆန္ဒနဲ့ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ရမဲ့အခါ လွှတ်သေးတဲ့ မဆလဥက္ကဌကြီး ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက ထားတာမျိုးပါ။ တော်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မပြီးဘဲ စောစောကလုံခြုံရေးမကျေနပ်လို့ စစ်သားကတိတည်ချင်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ၂ဝဝ၈ အခြေခံ ဥပဒေထဲမှာ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကောင်စီကျမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်မဲ့သဘောမျိုးရှိစောမောင် ကိုဖြုတ်ပစ်ပါတယ်။ အာဏာ ဆက် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ် နေပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မဲခွဲဖို့ လိုအပ်လက်ကိုင်ထားချင်တဲ့ အခုလက်ရှိဗိုလ်ချုပ်မှူး ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနှင့် ကိုယ်ပိုင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီ လာရင်လဲ မဲအများစု(၆)မဲကို စစ်တပ်ကယူထားပြီုးကြီးသန်းရွေကို ခေါင်းဆောင်တင်ပြီး အင်အယ်ဒီ ရင်စုတို့တွင်လဲ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် သားမို့ အခြေအနေအရ အရပ်သားပညာရှင်ကကို အာဏာလွဲမပေးဖို့ ဆင်ကြံကြံ ပါတော့တယ်။ နှင့်ညှိနိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်လို့ထဲ့သွင်းပြဌာန်းထား သမ္မတတက်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် ဘာမှမတတ်နိုင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက နောက်တက်တွေကို မင်း ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဆို အဲဒီ့နေရာတွေမှာ ပါဘူး။တို့ ဒိုင်ယာလော့ ဆိုတဲ့ စကားမပြောနဲ့ ပြောတဲ့ ပြည်သူတွေကတိုက်ရိုက်ရွေး ကောက်တင်မြောက် သူတို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ ပြည်ထောင်စုမပြိုနေ့ဟာ မင်းတို့ စစ်တန်းလျားပြန်ရမဲ့နေ့ဘဲလို့သတိ လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဘဲ ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ကွဲရေးတို့ ပြည်ပသြဇာခံမဖြစ်ရေးတို့ကို မှီတင်းနေပေးခဲ့ ပါသေးတယ်။ ဒီမိုကရေစီ စံနုန်းနဲ့လည်းကိုက်ညီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့နားလည်သဘောပေါက်မှုအ အနိုင်ရပါတီဟာ ဖွ့စည်းပုံရေးဆွဲ ဖို့ဘဲ တာ အခုလိုစစ်တပ်က၂၅%ဝင်ယူထားတာဟဲာပြည် ပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ဆောင်မှဒီမိုကရေစီနည်းကျကျဝန်ရှတယ်လို့ပြောပြီိး၉၃ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသား ထောင်စုမပြိုကွဲရေးဆိုပြီး ဘန်းပြထားတာထက် လို့ဆိုနိုင်မှာပါ။ အများဆန္ဒ ဂရုပြုစရာမလိုဘူးညီလာခံလုပ်ပါတယ်။ အင်အယ်ဒီ ကမကျေနပ်လို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့အပေါင်းအပါတွေရဲ့ အကျိုး စစ်တပ်ကနားလည်ပြီးသား စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ခိုင်းညီလာခံတက်နေရင်းကနုတ်ထွက်သွားတော့ ၉၆ စီးပွားကို ဆက်လက်ကာကွယ်ပေးနိုင်အောင် အ တဲ့အတိုင်းဘဲ လုပ်ရမယ်လို့ အထက်စီးနဲ့ အတင်းမှာညီလာခံရပ်သွားပါတယ်။ ၂ဝဝ၃ ခု ဒီပဲရင်း ကွက်ချ စီမံ ထဲ့သွင်းထားတာကပိုပါတယ်။ အကြပ်ပုံစံလုပ်နေတာဟာ ဒီမိုကရေစီ စံနူန်းနဲ့လုပ်ကြံမှု ကြီးအပြီးမှာတော့ လမ်းပြမြေပုံ(၇) ဆင့် ပြည်ထဲရေးအောက်က အထွေထွေ အုပ် လုံးဝမကိုက်ညီပါဘူး။ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ရပါတယ်။၂ဝဝ၄ မှာ ညီလာ ချုပ်ရေး မူုးတွေဟာ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ အင်အယ်ဒီနဲ့ အတိုက်အခံတွေ၊ တိုင်းရင်သားခံပြန်စပြီး အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို ၂ဝဝ၈မှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးအဖွ့တွေမှာအတွင်းရေဲးတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာက ဒါကိုဘဲထောက်ပြနေတာပါ။အချောသတ်၊ ဆန္ဒ ခံယူပြီးအတည်ပြုဖို့လုပ်တော့ မူုးဖြစ်ရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားတာ၊ တရားစီရင်ရေး စစ်တပ်ထဲက အောက်ခြေအဆင့်အရာရှိစစ်သည်အာလုံးသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းနာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးဝင် ကိစ္စတွေမှာလဲ ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်တို့ တ တွေနားလည်သဘောပေါက်လာရင်ပြည်သူတွေနဲ့မွေလူတွေသိန်းချီသေပါတယ်။စစ်တပ်က မုန်တိုင်း ရားသူကြီးတို့ကို သမတကဘဲခန့်နိုင်၊ စွဲချက်တင် ပူပေါင်းပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့အကြံအစည် ကိုဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးထက် သူတို့ကိုကယ်မဲ့ ဖွဲ့ ဖြူတ်ချနိုင်တာမျိုးဖြစ်ရမဲ့အစား၊ ဒီလိုကိစ္စတွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်မှ ပြည်သူ့တွေအပေါ် တာဝန်စည်းပုံကိုဘဲ ပြည်သူ ၉၂ ရာနုန်းကျော်က အဆုံးအဖြတ်အတွက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်န့ညှိဲကျေ သူတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုချင်ကြောင်းထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီး အတင်းအတည်ပြုလို့ နိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြဌာန်းထားတာ ပါ ခင်ဗျား။၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေး ကောက်ပွဲ တွေဟာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ သမ္မတထက်ပို ကိုမြတ်နိုး
Page 8 All Burma Monks Alliance (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖြွဲ့ ကီး) နေပြည်တော်-တိရစ္ဆာန်ရုံ ဥယျာဉ်မှ ကြံ့ ၂ ကောင် လွတ်နေ နေပြည်တော်-တိရစ္ဆာန်ရုံ အတွင်းရှိ ကြံ့ဖြူတော် ၂ ကောင် ယမန်နေ့ ည ၁၀ နာရီခန့်က င
Women Scheme Detailed Notification